HFE nadio ho an'ny ordinatera elektronika China Manufacturer
Description:HFE mpitrosa madio ho an'ny fiaramanidina,Mpanazava fialan-tsasatra ho an'ny Birao Elektronika,HFE mpitrandraka fitahirizana madio
Home > Products > Hydrofluoroether Clean Agent > Fitaovana fanadiovana ho an&#39;ny Birao Elektronika > HFE nadio ho an&#39;ny ordinatera elektronika
1. HFE hydrofluoroether fanadio ny tontolo iainana mifandanja amin'ny tontolo iainana, manana ny ODP lanjan'ny 0 sy ny ambany ambany GWP ambany;
4. Manana tady mahamay (54 ℃), ary azo ampiharina tsara amin'ny fitaovana fanadiovana isan-karazany, ary afaka milalao anjara amin'ny fikirakirana koa mandritra ny fotoam-piraisana sy fanadiovana. tsy mampidi-doza zavatra , tsy mirehitra ary tsy misy pesta, tsy misy afo na teboka teboka;
5. Hydrofluoroether Fitetezana tsara, mora vidy tsy misy miala, ary afaka mitana andraikitra tsara amin'ny fitsaboana ny fidiovana;
6.Rariny ny Spray dia tsy misy poizina sy tsy mampidi-doza ary tsy mampikorontana;
Ny vahaolana amin'ny fikojakojana dia feno 25kg / barrel, na ho an'ny mpanjifan-tsakafo, mora voatahiry ary
HFE mpitrosa madio ho an'ny fiaramanidina Mpanazava fialan-tsasatra ho an'ny Birao Elektronika HFE mpitrandraka fitahirizana madio